Darawalada basaska Jönköping oo laga mamnuucay in ay ku hadlaan luuqadaha kale | Somaliska
War cusub: Maamulka sare ee shirka Keolis ayaa ka laabtay go’aanka.
Darawalada basaska magaalada Jönköping ayaa laga bilaaba xagaaga lagu amray in ay ku hadlaan Swedish oo keliya waqtiga ay shaqada ku jiraan iyo xitaa waqtiga nasashada. Shirkada Keolis oo la wareegeysa adeega basaska ayaa kunturaada cusub ee dhamaan shaqaalaha saxiixayaan ku cadeysay in dhamaan lagu hadlo Swedish.
Arinta cajiibka ah ayaa waxay tahay in xitaa waqtiga shaqaaluhu ay ku jiraan maqaaxita oo ay nasanayaan laga doonayo in ay ku hadlaan Swedish oo aysan darawalada kale ee ka soo jeeda dalkooda kula hadli karin luuqadooda.
Qofkii u hogaansami waaya sharcigaan cusub ayay macquul tahay in shaqada laga cayriyo sida lagu qoray kunturaada.
Madaxa ururka darawalada ayaa sheegay in dhibaato ay tahay in dhowr luuqadood lagu hadlo asagoo sheegay in markii maqaaxida la fadhiyo ee dhowr luuqadood lagu hadlo dadku ay ku wareerayaan, intaas ayuu ku daray in dadka qaarkood marka ay luuqadooda ku hadlayaan ay qayliyaan asagoo tusaale u soo qaaday luuqada Talyaaniga.
Maamulka kamuunka Jönköping ayaa sheegay in aysan dhibaato u arkin shuruudaan balse Xeer ilaaliyaha Sinaanshaha (DO) ayaa sheegay in haddii ay dacwo soo gaarto ay arintaan eegayaan.
Arintaan ayaa u muuqata cunsuriyad loogu dan leeyahay darawalada soo galootiga ah oo qaarkood ay macquul tahay in aysan ku hadli karin Swedish. Mida kale waxaa la is dhihi karaa tani waxay shirkada marmarsiyo u siineysaa in ay ceyriyaan shaqaalaha soo galootiga ah oo ay Swedish ku badalaan.
Isku-dayga afgambiga Turkey iyo labo wajiile-nimada Swedishka
Sheekadaan sidaan is leeyahay waxaa ku lug leh SD, xisbiga kalagi jiiteha ah, kamuunka arintaasi ka dhacdayna waxay ku noqon doontaa waji gabax hadii aysan ka hortagin waayo waa cunsuriyad dhamaystiran. Tusaalaha loo soo qaatay luuqada Talyaaniga waxay u badantahay in ay tahay marin-habaabin ee waxaana loo dig iyo hamleeyaha luuqdaha asal ahaan aan Europe looga hadlin, sida Carabiga,Somaliga Turkiga iyo wixii la halmaala.
March 8, 2011 at 15:14
Wallee Timirta lafbaa ku jirta !!
Saciid walaal 100% waan kugu raacsanahay , welibana dhanka Luuqada Talyaaniga , waxaan oran karaa , waa uun maqaar saar .
Darawaliin Talyaaniya waa ku yaryihiin halkaa , marka meeshaa umuuraa kasoo muuqata , waayahaase sheegaa .
Balse wax walba waan uga fadhinaa , wax walbana waa ina qabataa , haddii aan Qaxooti wadankoodii soo gubay nahay , marka waa in aan Dul adkaysi badan yeelanaa!!
March 9, 2011 at 05:49
Waa sax bashir wan adkaysanayna waayo anakaa wadankeni soo gubnay waxana u dulqadanayna wax walba oo nala soo gudbonaada dawlada ay carab baabtay waxan dhihi karna waa dowlada somaliya waxayna donayan in lasuuliyo luqadayna hooyo
March 9, 2011 at 08:14
waad salaamatihin dhamaan tiin marka hore , marka xigta hadaan ka dhiibto meeshaan figradeeyda ku aadan go an ka eey gaareen dakas aniga waxey ila tahey in eey ku sax san hihii därför att hadaan ka hadlo run ahaan tii qomiyada soomaaliye ee aan ka dhashey anigaba igu daroo aad baan u isticmaalnaa luuqadeena markaan lajoogno qoomiyadaha kale oo xitaa kuma fakarni daka nilajooga ama nila shaqeenayaa xushmeey tusaale ahaan markaad raacdo tareemada iyo basabka aad baan u qeelinaa hanqoto markaa mobil ka ku hadleeno iyo waliba hadaan is agfadhin anka oo markaas dadka eey u maleeyaan in aan dagaalameeno gabar ilashaqeeso ayaa waxeey igu tiraahda markaad afka soomaliga ku hadleeso waxaa lomaley in aad dagalameeso.
maraka waxaan dhihi lahaa aan is saxno oo aan xushmeeno daka aan lajoogno.